Albert naKupfer: 2 mapeni akanaka senge dzimwe nzira dzeCerebro | Kubva kuLinux
Zvisinei, mhando ye Operating system yatinoshandisa uye kunyangwe komputa, nekuti hapana chakavanzika, zvinogara zviri nani iko kushandiswa kwekhibhodi nenzira yepamberi iyo inonyanya kushandiswa kana ingangoita yega yekushandisa mbeva (mbeva).
Uye nekuda kwechikonzero ichocho, mune akawanda Maitiro Ekushandisa uye MaApplication, inonzi iya mapfupi ekhibhodi (hotkeys) kana mafoni acho anogadzirwa Vapepeti, zvezviito kana zvinoshandiswa, ku kunatsiridza kugadzirwa kwemushandisi. Mune yedu GNU / Linux Distros tine mienzaniso yakanaka, imwe yacho iri kunzi kunodaidzwa "Uropi", yatakataura nezvayo nguva pfupi yadarika takataura, uye zvimwewo izvo 2 zvatichataura nhasi. Vari "Albert naKupfer".
Dingindira re mushandisi kugadzirwa pane akasiyana maSystem eSystem, anogona kunge ari mashoma kumunhu anowanzo shandisa, asi kune avo vari tekinoroji nyanzvi kana kubva kune imwe nzvimbo yebasa, zvakakosha usabatanidze zviito zvine chekuita nekushandisa kwakasimba kwemabhatani egonzo kuita zvinodzokororwa kana kuita zvezuva nezuva zviitiko.
Uye mune izvo, GNU / Linux Distros, pakati pemamwe ayo akawanda nakisisa zvinhu, ine rakanakisa renji sarudzo dze app kana chiito chekutanga kubvisa mabasa akadaro anosemesa kudzikisira kushandiswa kwegonzo, mumabasa akaita se, enda kumenu yekushandisa uye unomhanya kunyorera kana kuenda kuchiteshi uye unomhanya kuraira.
1 Pitchers: Albert naKupfer kuti vawedzere kugadzirwa
1.3 Zvimwe zvine maratidziro
Pitchers: Albert naKupfer kuti vawedzere kugadzirwa
Zvinoenderana nevagadziri vayo mune yayo zviri pamutemo webhusaiti, Albert ndiye Launcher inotsanangurwa seinotevera:
"Launcher inokwanisa kuwana zvese nezvisingaite. Nekudaro, inokwanisa kumhanyisa mashandisiro, kuvhura mafaera kana nzira dzawo (maforodha / madhairekitori), kuvhura mabhukumaki mubrowser, kutsvaga webhu, kuverenga zvinhu, uye zvimwe zvakawanda. Albert ndeye desktop agnostic launcher, ine zvinangwa zvekushandisa uye runako, kuita uye kuwedzera. Iyo yakanyorwa muC ++ uye yakavakirwa pane Qt chimiro. Iyo inovandudzwa pasi peGPL rezinesi, 100% yemahara uye yakavhurwa sosi".
Parizvino kuenda kune iyo yakagadzikana vhezheni nhamba 0.16.1 Zvemusi 12 / 2018, uye zvakare ane yako webhusaiti pa GitHub.
Zvinoenderana nevagadziri vayo mune yayo zviri pamutemo webhusaiti, Kupfer ndiye Launcher (Launcher) inotsanangurwa seinotevera:
"Kupfer inongedzo yekukurumidza uye nyore kuwana kune zvinoshandiswa uye zvinyorwa zvavo. Iko kushandiswa kwakawanda kuita kutsvaga chaiko kunyorera woitangisa. Isu takaedza kuita Kupfer kuve nyore kuwedzera nemapulagi kuitira kuti iyi yekukurumidza nzira paradigm iwedzerwe kune zvakawanda zvimwe zvinhu kupfuura kungoisa chete. "Tinotarisira kuti kushandisa Kupfer kunonakidza."
Parizvino kuenda kune iyo yakagadzikana vhezheni nhamba 3.19 Zvemusi 03 / 2017, uye zvakare ane yako webhusaiti pa GitHub.
Zvimwe zvine maratidziro
Inobatsira Window Navigator (Awn): https://launchpad.net/awn
Launcher yedhadha: https://launchpad.net/~the-duck/+archive/ubuntu/launcher
GNOME Ita: https://do.cooperteam.net/
gnome tsoka: https://schneegans.github.io/gnome-pie.html
Plasma kutanga: https://userbase.kde.org/Plasma/Kickoff
Whisker Menyu: https://gottcode.org/xfce4-whiskermenu-plugin/
Hongu iwe, nechimwe chikonzero iwe haushandise se chokutanga App a Ubongo, Albert kana Kupfer, zviri nani kuti iwe usarudze imwe yakafanana Ulaunchersezvo, mamwe ese akapfuura echinyakare, akasiiwa, kana epamusoro-soro asi ari enzvimbo yedesktop. Ulauncher ndeyemazuvano, yazvino, inotsigirwa Launcher, ine akawanda anowanikwa ekuwedzera uye haatsamire pane imwe Desktop Nzvimbo Naizvozvo, isu tichakurumidza kushambadzira nezvazvo.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" about «Albert y Kupfer», izvo zviri zviviri zvakanaka zvigadzirwa zvekushandisa zverudzi Vapepeti, kunyangwe Ubongo uye Ulauncher; kuva zvakawanda kufarira uye kushandiswa, Zvese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Albert naKupfer: 2 mapiketi akanakisa senge dzimwe nzira dzeCerebro
Zvakanaka, kana Kupfer isina kuvandudzwa kwenguva yakareba kudaro, ndinofungidzira kuti inenge yatosiiwa, iyo p ...
Kwazisai Teo! Ndinovimba unofarira zvemukati uye zvaibatsira.
Zvirokwazvo vatambi vazhinji vari mumamiriro echando kana kusiiwa. Iwo ayo anoramba ari echizvino-zvino uye anoshanda ari, kwandiri, Cerebro uye Ulauncher. Vakaparadzaniswa kana pamwe chete ivo vakanakisa nedhata ravo, izvo zvinonyatsoenderana, paDistro kwavanogona kushandiswa. Ndinozozvishandisa pamwechete pakombuta yangu, nekuti havana kundipa dambudziko, nekuti zvine simba zvine mwero uye vanoshanda zvakakwana paMilagrOS 2 (MX Linux 19) yangu.
Ini ndinoda Ulauncher
Kwaziso Logan! Sezvauri kuona ipapo isu takakurudzira Ulauncher asi kwete sekutsiva Brain asi semubatsiri, nekuti Ulauncher inoshandisa yakawanda RAM memory zviwanikwa. Ini ndinokurudzira kuishandisa pasina kuwedzeredzwa pamwe neCerebro.
Firefox 77, vhezheni ine shanduko inonyanya kunangidzirwa kune vanogadzira
Stratis 2.1 inouya nerutsigiro rwekuparadzanisa kunyorera uchishandisa LUKS2